Wararka - Waa maxay Rotary Airlock Valve & waxa loo isticmaalo
Waayo-aragnimada 20 Sano ee Goobtan
Qalab Weriye Quwad leh oo Bir ah
Nadiifinta Tooska ah ee Is Nadiifinta Wareegtada Quudinta Hawada Qufulka Qufulka Xiddigta Qufulka Qufulka Hawada Qufulka
Ku afuufi qulqulka iyada oo loo marayo Walalka Hawada Rotary ee Wanaagsan ee loogu talagalay habka gudbinta daqiiqda bariiska
Waa maxay Rotary Airlock Valve & waxa loo isticmaalo
1.Waa maxay airlock rotary valve
Aaladaha wareegta hawada waxaa loo isticmaalaa is-dhexyaalka hababka wax ka qabashada adkaha, sida caadiga ah marka ay lagama maarmaan tahay in la kala saaro 2 aag oo ku jira xaalado kala duwan (cadaadiska inta badan) iyada oo u oggolaanaysa in adag uu ka tago xaalad kale.
Valves Rotary, oo sidoo kale loo yaqaan valves star, sidaas darteed waxaa la isticmaalaa bilowga iyo dhamaadka gaadiidka pneumatic. Waxay u oggolaanayaan inay ka keenaan aagga cadaadiska hoose ee aagga cadaadiska hooseeya ee bilowga xariiqda iyagoo gacan ka geysanaya inay ka saaraan adag ee socodka hawada a dhamaadka xariiqda.
Tuubooyinka noocan oo kale ah waxay awoodaan inay sameeyaan qiyaaso qallafsan, sidaas darteed, waxaa sidoo kale lagu rakibi karaa qalab qiyaaseed, inkastoo aysan ahayn dhaqan wanaagsan.
Waxaa jira 2 nooc oo ah furayaasha rotary-ga ee hawada: hoos u dhaca nooca iyo dharbaaxada nooca. Labada noocba asal ahaan waxay bixiyaan natiijooyin isku mid ah, si kastaba ha ahaatee, habka ay u sameeyaan iyo sifooyinkoodu wax yar bay ka duwan yihiin.
Feed-bixiyeyaasha Airlock waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha iyadoo la adeegsanayo codsiyada meelaha soo socda:
- Warshadaha cuntada (dubidda, caanaha, kafeega, badarka)
- Dhisme (sibidh, daamur)
- Tamarta (warshad koronto)
- Kiimikada / Kiimikooyinka Batroolka / Polymers
Rotary feeders mabaadi'da shaqada iyo qeexitaannada ugu muhiimsan ayaa lagu bixiyaa hoos.
2. Ku rid waalka wareega oo ku afuufo waalka wareega
Ku Dhaca Hawo-locked valve valve
Tuubooyinka wareega hawada ee qufulka ayaa "ku dhacaya" alaabta tuubada ama qalabka hoose. Waxaa jira flange soo galo iyo flange outlet.
Ku afuufo waalka rotary ee hawada xiran
Afuufta xididdada xididku waxay si toos ah ugu xidhan yihiin khadka gudbinta. Hawada loo isticmaalo xariiqda gudbinta ayaa sidaas darteed si toos ah u dhex mareysa alveoles ee valves, iyada oo xaaqaysa alaabta.
Caadi ahaan, afuufidda alwaaxyada waxaa la isticmaalaa marka ay jirto dherer aad u xaddidan ama marka alaabtu u janjeerto inay ku dhegto gudaha rotor-ka. Codsiyada kale, hoos u dhaca qaabka ayaa aad loo door bidaa.
Lahaanshaha rotor-ka tooska ah ee qulqulka tuubada waxay u horseedi kartaa jebin weyn oo alaabta la raro, gaar ahaan kiiska haddii dhowr dhibic oo ka mid ah tubooyinka ay si isdaba joog ah u socdaan isla tuubooyin isku mid ah. Kiiskan gaarka ah, waxa laga yaabaa in la tixgaliyo valves-ka soo dhaca si loo ilaaliyo alaabta.
3. Cadaynta Xiddigta Valve iyo ogaanshaha xidhiidhka
Xiddiguhu waxay caadi ahaan leeyihiin nadiifin aad u yar oo u dhaxaysa daabadaha rotor-ka iyo stator-ka, waa lagama maarmaan si loo bixiyo hawo daboolaysa inta u dhaxaysa meelaha kor iyo kuwa hoose ee aan isku cadaadis ahayn.
Nadiifinta caadiga ah ee valves rotary airlock waa 0.1 mm waxayna inta badan u dhaxaysaa 0.05mm ilaa 0.25 mm iyadoo ku xidhan adeega laga filayo waalka (kala duwanaanshiyaha cadaadiska sare ee dhinac kasta Tani waa nadiifin aad u yar oo sharxaysa in valves rotary inta badan ay ku dhacaan xagashada sababtoo ah xiriiriyaha rotor / stator. Shaxda soo socotaa waxay soo koobaysaa sababaha caadiga ah ee xidhiidhka.
4. Ilaalinta qaraxa
Qulqulka hawada wareega waxa loo isticmaali karaa sidii curiye go'doon ah si looga hortago in boodhka qaraxu ku faafo rakibaadda. Taas awgeed, valve rotary-ga ee hawadu waa in la caddeeyaa inuu yahay mid u adkaysta shoogga qaraxa iyo ilaalinta ololka.
Si loo helo sifooyinkaas, valve waa in loo qaabeeyaa si:
- Jirka iyo rotor-ku waxay u adkeysan karaan cadaadiska qaraxa - sida caadiga ah 10 bar g
- Cidhifka nadiifinta garbaha/guryuhu waa inuu ka yaraa 0.2 mm
- Ugu yaraan 2 daab oo dhinac kasta oo ka mid ah waalka waa in ay la xiriiraan guriga (taas oo macnaheedu yahay in tirada guud ee baalku ay ahaadaan > ama la mid ah 8
Nadiifinta hoose waxay ogolaan doontaa xirid wanaagsan waxayna yaraynaysaa qulqulka waalka qufulka hawada ee wareega. Si kastaba ha ahaatee xitaa hoos u dhac ayaa dhici doona. Sidoo kale, hawada ku xayiran jeeb kasta ayaa sidoo kale la sii deyn doonaa marka jeebka loo furo aagga cadaadiska hooseeya. Tani waxay keenaysaa daadinta hawada.
Diidashada hawadu waxay ku sii kordhaysaa kala duwanaanshaha cadaadiska waxayna kordhisaa xawaaraha wareega ee waalka. Waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan waxqabadka valve, gaar ahaan budada khafiifka ah, tan iyo hawada la sii daayo ayaa dhab ahaantii dareerin doonta budada oo ka hortagaysa inay buuxiso jeebka.
Ifafaalahan waxaa lagu markhaati furi karaa qalooca waxqabadka ee garbaha rotary airlock : awooddu waxay gaari doontaa assymptot iyo xitaa hoos u dhac xawaare sare ah tan iyo jeebabka aan la buuxin karin mar dambe by alaabta, dheecaan aad u badan si ay u helaan waqti ay ku dhacaan jeebka.
Si loo xakameeyo ifafaalahan oo loo wanaajiyo waxqabadka waalka, hawo sax ah ee waalka wareega waa in la hirgeliyaa. Kanaalka degsiimada ayaa lagu rakibay dhinaca jeebabku soo noqonayaan si ay hawada uga faarujiyaan ka hor inta aysan soo qaadin badeeco cusub. Kanaalka ayaa hawada u diraya shaandhada si loo sii daayo.
6. Xisaabinta naqshadeynta waalka rotary-ga hawada (cabbirka)
Xisaabinta awoodda ee waalka xiddigta si loo gaaro wax-soo-saarka la bixiyay waa shaqo ka mid ah dhexroorka waalka xiddigta, xawaaraha wareeggiisa bartilmaameedka iyo dabeecadda badeecada.
- Inta uu weyn yahay valve star, sare waxay noqon doontaa awoodda.
- Xawaaraha wareegga sare wuxuu guud ahaan ka dhigan yahay wax-soo-saar badan laakiin wax-soo-saarka wuxuu joogsan doonaa inuu dhaafo xawaare cayiman
- Inta badan dareeruhu waa budada, sare u kaca ayaa noqon doona wax soo saarka, waxaa mar kale aad u fudud alaabooyinka abuuri doona xaddidaad wax soo saarka ee xawaaraha wareeg gaar ah wax soo saarka waxaa lagu qiyaasi karaa laga bilaabo alaab-qeybiyaha abascus, laakiin aqoonta alaabtu waxay noqon doontaa qayb muhiim ah. .
7. Dhibaatooyinka caadiga ah ee hawo xidhidhiyaha valves rotary
Dhibaatooyin kala duwan ayaa saameyn ku yeelan kara waalka xiddigta inta uu shaqeynayo. Dhibaatooyinka caadiga ah waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
- Waxqabadka ka hooseeya naqshadeynta (wax soo saarka ka hooseeya intii la filayay)
- Burbur ka soo gaaray xiriirka birta / birta
8. Hawo gadashada waalka rotary ee hawada - Sida loo doorto valve rotary ee hawada
Hawo xidhid valve iib ah: Iibsashada waalka rotary ee hawada cusub
Markaad warshadaada u raadinayso hawo-locke cusub, su'aalaha soo socda ayaa loo baahan yahay in la waydiiyo si loo soo gato tilmaamo sax ah:
• Naqshadeynta waalka rotary ee hawadu ma ka fiican tahay in la dumiyo ama la dhex maro?
●Ma u baahan tahay walxo gaar ah (tusaale ahaan birta aan la kaxeynin) ama fulinta caadiga ah ayaa kugu filan?
●Waa maxay faa'iidada aad u baahan tahay iyo waa maxay cufnaanta ugu badan ee alaabta si loo farsameeyo, waxay siin doontaa dhexroorka waalka
●Waalka ma loo gudbiyaa kulayl? Ma waxay u baahan tahay in ay leedahay nadiifinta rotor stator gaar ah?
●Waalladda quudinta ma khadka gudbinta pneumatic cadaadis? Ma u baahan tahay degsiisinta?
●Ma loo baahan yahay in si joogta ah loo galo nadiifinta gudaha waalka ?
●Boodhadu ma bilaashbaa mise maro gaar ah iyo naqshad jeebka ayaa loo baahan yahay ?
●Valafka wareegta ee hawadu ma u baahan yahay shahaado ka shaqaynta aagga qaraxa boodhka ah ? Hadday haa tahay, waa kuwee soocidda aagga la tixgelinayo gudaha iyo hareeraha waalka?
●Qalabka ma u baahan yahay inuu u adkaysto qaraxa (sida caadiga ah 10 bar)?
Haddii aad u baahan tahay hawo xidhidhiyaha rotary iyo valves weeciye ee xadhkaha gudbinta pneumatic, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho.
quudiyaha rotary, 3 Way Ball Valve, Xakamaynta Elektarooniga ah, valve rotary, 3-Way weeciye Valve, hawo xidhid,